Pejy fandokoana trano sy pirinty maimaim-poana
Ny trano dia iray amin'ireo zavatra voalohany anombohan'ny sary an-tsary ny zazavavy sy ny zazalahy amin'ny preschool. Satria nifandray tamin'ny trano isan-karazany izy ireo isan'andro ary rehefa dinihina tokoa, ny tranony na ny tranon'ny ray aman-dreny dia midika fiarovana manokana.
Pejy fandokoana trano
Ny tsipika matevina dia manamora ny fandokoan'ireo zazavavy sy zazalahy ny tsanganana tsirairay amin'ilay sary araka ny hevitr'izy ireo manokana. Izy io dia azo atao amin'ny crayons, pen pen ary crayons savoka. Ny fanindriana ny sary dia manokatra ny pejy miaraka amin'ny maodely fandoko voafantina:
Lokoy ny villa
Lokoy ny trano
Trano misy tokontany aloha
Trano avo tanàna lehibe
Trano hazo antsasaky ny hazo
Fiakarana avo / trano ambony
Doko amin'ny isa isa
Trano manoloana avana
Trano misy dobo filomanosana
Manana fanontaniana, sosokevitra, tsikera ve ianao sa mahita bibikely? Misy lohahevitra tsy tokony hotaterinay ve sa sary fandokoana tokony hoforoninay? Aza misalasala mifandray aminay
Teny lakile fanampiny: Villa, Villen, trano, trano